Jaffa မြို့ဟောင်း….(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Jaffa မြို့ဟောင်း….(၂)
Posted by hmee on Jan 8, 2012 in Creative Writing, Local Guides | 21 comments
ကလီယိုပက်ထွှာရေချိုးခန်းနေရာ။ နွားနို့နဲက ချိုးတယ်ဆိုပဲ။ မှန်လောက်တယ် နွားနို့ အလွန်ပေါတာကိုး။
မြို့ဟောင်းအကြောင်း ရေးထားတဲ့ဗုဒ်။ သဂျီးအတွက်။
စစ်သား၊ စစ်သမီးတွေ လေ့လာရေး ထွက်လာတယ် ထင်ပါရဲ့။
Jaffa မြို့ဟောင်းရဲ့ မီးပြတိုက်ဟောင်း။
ရုပ်တုပဲ ဘာအရုပ်လည်းတော့ မသိဘူး။
နပိုလီယန်တံတား ထိပ်က ဆိုင်းဗုဒ်လေး။
နပိုလီယန်ခေတ်က အ၀တ်အစားနဲ့ မင်္ဂလာစုံတွဲ ရာသီခွင်ကိုင်ပြီး ဆုတောင်းနေတဲ့ပုံ။
(Zodiac sign -ဇိုဒိရပ်ဆိုင်းတွေမြင်တော့ England မှာZodiac လို့သူကိုယ်သူထင်ပြီး ပြစ်မှူတွေကျူးလွန်တဲ့ တကဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတခုကိုပြန်သတိရသွားမိလိုက်တယ်.။)
ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ သူမတူ ရှု့ခင်းတွေနဲ့ လျှပ်တပြက် (စစ်သား စစ်သမီးတွေပုံရော၊ နပိုလီယံဝတ်စုံနဲ့ စုံတွဲပုံကိုရော) ရိုက်ချက်တွေကို သဘောကျတယ်။
ဒီကနေ့ အလှူတစ်ခုသွားတော့ ရွာထဲမှာ ပြန်ပြောဖို့ဆိုပြီး လှူပ်ရှားနေတဲ့ပုံတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကြိုးစားတာ လျှပ်တပြက်ရိုက်ချက် မရလိုက်လို့ စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာ။
စိတ်မကောင်းဘူး။ ဓါတ်ပုံတပုံ လိုသွားလို့။ ဒီနေ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာတွေနဲ့ နဲနဲလှမ်းတာနဲ့ လိမ္မော်ပင်ကြီးကို ထပ်သွားပြီး မရိုက်ခဲ့ဘူး။ အရင်က ရိုက်ထားတယ် ထင်တာလည်း ပါတာပေါ့။ အိမ်ရောက်မှ ဟာ.ဒ်ဒစ်ထဲကော အခွေတွေကော မွှေနှောက်ရှာဖွေတာ မတွေ့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နဲနဲစိတ်ဆိုးသွားတယ်။ သေချာအောင် ထပ်မရိုက်ခဲ့လို့။
“မဗိုက်တစ်ယောက် ချော်လဲမှာ မကြောက်” ဆိုပြီး ဒီလောက်ပုံတွေရိုက်ခဲ့တာ လိမ္မော်ပင်ကြီးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့နော်
ဒီပုံတွေကို ဒီလောက်ကြည့်ရတာနဲ့တင် ကျေနပ်နေပါပြီ
အောက်ဆုံးက “နပိုလီယန်ခေတ်က အ၀တ်အစားနဲ့ မင်္ဂလာစုံတွဲ ရာသီခွင်ကိုင်ပြီး ဆုတောင်းနေတဲ့ပုံ။ ” လေးကို သဘောကျမိတယ် …………..
မမှီက ထပ်သွားပြီးရိုက်ချင်တာ ဒါပေမဲ့ တိုက်ကြို တိုက်ကြားက သွားရတော့ လမ်းခင်းထားတဲ့ တကယ့် သဘာဝကျောက်တုံးတွေက နဲနဲချော်တယ်။ မမှီကို မသွားစေချင်ဘူး။ ကားကလည်း ကိုယ်ကမမောင်းတတ်တော့ သူက ကားကိုထားခဲ့လို့က မရပြန်ဘူး။ အ၇င်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ရှိပါတယ်ပဲ အတင်းပြောနေတယ်။ မမှိက ၇ိုက်လာတာ ပိုသေချာတယ်ပေါ့။ အိမ်ရောက်မှ ရှာလို့ မတွေ့လို့ ရန်ရှာပြစ်တယ် ဘယ်ရမလဲ။
ရန်ကုန်မှာဆို စာရေးဖို့ တောင် အနိုင်နိုင်..မို့ ပါ
Jaffa နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ Old လို့ တွေ့လို့။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ထက် ၂ဆ နီးပါး ပိုတယ်နော်။
နပိုလီယန်ခေတ်က သတို့သမီး ဝတ်စုံ ကပန်းရောင် လေးနော်။ ဒီခေတ်မှာ တော့ ပန်းရောင် ဝတ်တာ ရှားလာသလားလို့။
ရာသီဥတု အတော်သာယာ ပုံရတယ်။ ပူတဲ့ဘက် ပိုသလားဟင်။
ပုံလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးဘဲ မှီ ရေ။
အစ္စရေးမှာ ဆောင်း ၆လ၊ နွေ ၆လ ပါ။ ဆောင်းမှာပဲ မိုးရွာပါတယ်။ အခုက ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ နေပူတဲ့နေ့ဆို နေလို့ ကောင်းပါတယ်။ မိုးရွာရင်တော့ ခေါင်းတွေပါ ကျဉ်အောင် အေးပြန်ရော။ နွေရာသီမှာလည်း အလွန်ပူပါတယ်။ တောင်ပိုင်းမှာဆို အပူချိန် ၅၀လောက်ကိုရှိတာ။ ကျွန်မကတော့ ပူတာထက် နေစူးတာကို မခံနိုင်ဘူး။ နေရောင်က တော်တော်ကို စူးရှပါတယ်။
မမမှီရေ မြင်ရခဲတဲ့ပုံလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော်
မာမီပေါက်ပြောသလိုပဲ ရန်ကုန်ပြန်မလာခင်ရှိသမျှပုံတွေ အကုန်တင်ပစ်လိုက်
ဒီမှာပုံတင်ရင်တော့ တော်တော်စိတ်ရှည်ပြီး အချိန်ပေးမှရတာ
မိုးဇက်ရေ အသုံးလိုမယ်ဆို ယူပါ ရပါတယ်။ ဒီပုံတွေကို ရွာကပိုင်တာမို့ ရွာထဲကလူတွေ အသုံးလိုရင် ခွင့်မတောင်းပဲ သုံးပါ ရပါတယ်။
မြင်ရခဲတဲ့ ပုံလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ ၁ ရော ၂ ပါ ဖတ်သွားပါတယ်
သူတို့တွေရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ပညာ၊ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေကို ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ပညာတွေ ကတော့ အံ့မခန်းပဲနော်
နွယ်ပင်ကြောင့် တစ်ယောက်သောသူ တို့ မမှီကြောင့် အိမ်ကြီးရှင် တို့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးအသစ်လေးတွေ ရတယ် ကိုယ်လဲ ထွင်ဦးမှ
မမှီ သားလေးမွေးရင် အစ္စရေးက ခေါင်းဆောင်တွေလို တိုင်းပြည်ကို ကမ္ဘာ့အလည်မှာ အများလေးစားအောင် ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့သူ မိန်းကလေး မွေးရင် ကလီယိုပတ်ထရာ လို အချောအလှလေးမွေးပါစေ
ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ ရွာထဲက မောင်နှမတွေ အပြင်မှာ တွေ့ရမှာမို့ ၀မ်းသာမိပေမဲ့ ၊ အစ္စရေးအကြောင်းတွေ မဖတ်ရတော့မှာအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဘူး
စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်း တင်မလို့ စိတ်ကူးထားပေမဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက သိပ်မကောင်းလို့ အားသိပ်မပါဘူး ဖြစ်နေတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ဦးမှပဲ။ ကိုနိုဇိုမီ ပြောသလို ဒီရောက်စက အစ်ကိုတယောက်က အကြံပေးတယ် ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်ဗျာ မွေးစမ်းပါဗျ။ တကယ့်အံ့ဖွယ်နေရာမှ အမှတ်တရ မွေးရတာတဲ့။ သားလေးတယောက်ရှိပြီးပြီမို့ သမီးလေးမွေး။ စနေသမီး နေတက် ရေတက်မှာမွေး ဂျုးမများ ၀င်စားလို့ကတော့ ထူးချွန်တာ လိုက်မှီမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ သူ့ဇာတာနဲ့သူ ဆိုးရင်လည်း လိုက်မမှီရင် ဒုက္ခ အစ်ကိုရေ ဆိုလို့ ရီလိုက်တာ။
မပြန်ခင် ရနိုင်သလောက် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်လာခဲ့ဦးနော။
ဂျူးတွေအကြောင်းတော့ အရင်ရေးထားတာတွေပဲ နဲနဲဖတ်ဘူးတယ်။
ဒီကနေ့ လက်ရှိဂျူးတွေကတော့ တော်တော်ကွာခြားနေလောက်ပြီလို့ ခန့်မှန်းမိတာပဲ။
အင်္ဂလိပ် တွေ လိုပေါ့နော်။
မမှီရန်ကုန်ပြန်ရောက်လို့ ပုံတင်ရခက်တဲ့အခါ အဲဒီဗဟုသုတလေးလဲ စာရေးပြီးမျှပါဦးလို့ ကြိုတင်ပွဲတောင်းထားလိုက်ပါသဗျာ။
ဦးပါလေရာရေ ဂျုးကတော့ ဂျုးပါပဲရှင်။
့hmee အဲဒီမှာရေးထားတဲ့စာဂျူးစာတွေဖတ်တတ်ပြီလား။ အဲဒီမှာ အင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောတာလား။
ရာသီခွင်ကမိန်းမရဲ့ရာသီခွင်ကိုကိုင်ရတာလား ။ယောကျာင်္းရဲ့ရာသီခွင်ကိုကိုင်ရတာလား။ လောလောဆယ်ရောက်နေတဲ့ရာသီခွင်ကိုကိုင်ရတာလား။
ဓါက်ပုံရိုက်တာလဲရိုက်တာပေါ့။စစ်သားစစ်သမီးပုံတွေတော့အရမ်းသွားမရိုက်နဲ့ တော်ကြာ သူကြီးခိုင်ရဲ့ စပိုင်ဆိုပြီး အဖမ်းခံနေရဦးမယ်။
ဂျုးစာကတော့ တမျိုးပဲ။ သားဆိုတာလိုက်ဆိုရင်းနဲ့ ၁ကနေ ၁၀ထိတော့ရတယ်။ စာတော့ မဖတ်တတ်ဘူး။ တချို့စကားတွေတော့ နည်းနည်းနားလည်တယ်။ လူတိုင်းနီးပါး အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်တယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေကလွဲလို့ပေါ့။ သူတို့စကားကို ဟီဘရူးစကား ဟီဘရူးစာလို့ ခေါ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောနိုင်ရင်ကို တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ မိမိရာသီခွင်ကိုကိုင်ပြီး မြေထဲပင်လယ်ကို မျက်နှာပြုပြီး ဆုတောင်းရင် တောင်းတဲ့ဆု ပြည့်တယ်တဲ့။ ဒီက စစ်သား စစ်သမီးတွေက အေးဆေး တွဲပြီးတောင် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်လာသေးတယ်။
နာရီစင် ကြီး ကြည့်ရတာ
မန်းတလေး မြို့ က နာရီစင် နဲ့ 
နင်လား ငါလား ဘဲ
မြို့ဟောင်းထဲက အိမ်တွေ ခုချိန်ထိ လူနေလို့ရတာ အံ့ရောပဲ…
အထိန်းအသိမ်းကောင်းလိုက်ကြတာ … စစ်သား စစ်သမီးဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေလည်း အဲ့ဒီမှာ စစ်မှုမထမ်းမနေရ လားဟင်…
နပိုလီယန်ခေတ်က အ၀တ်အစားနဲ့ စုံတွဲက ကဗျာဆန်လိုက်တာနော်…
နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားလိုက်တာ၊
မြတ်စွာဘုရား မပွင့်မီ ပေါ့နော။